Ebumnuche 3 Mere Ndị Otu Ahịa Ji daa Na-enweghị Nchịkọta | Martech Zone
Omenala ọdịnala nke onye na-ere ahịa na-aga nke ọma bụ onye na-aga (ikekwe yana fedora na akpa), nke nwere ikike, nkwenye, na nkwenye na ihe ha na-ere. Ọ bụ ezie na mmuta na amara na-ekere oke na ahịa taa, nchịkọta abiala dika ihe kachasi nma n'ime igbe ndi otu ahia.
Data bụ isi ihe dị na usoro ahịa ọgbara ọhụrụ. Me ihe kachasị na data pụtara iwepụta nghọta ziri ezi iji chọpụta ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị arụ ọrụ. Na-enweghị nchịkọta iji mee nke a, ndị ahịa na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ n'ọchịchịrị, na-eduzi nghọta. Dị ka nkuchi nke nchịkọta na-aga n’ihu na-etolite, ka ngwa ọrụ ahụ na-abụwanye ọkaibe, ndọda ezughị; na-enweghị ike iwekota nchịkọta N’oge ire ere nile na-anọchite anya ọghọm asọmpi na-akpata nkwarụ.
Nnyocha sitere na McKinsey, nke e bipụtara na eBook akpọrọ Nnukwu data, nchịkọta, na ọdịnihu nke ahịa & ire ahịa, chọpụtara na ụlọ ọrụ ndị na-eji Big Data eme ihe n'ụzọ dị irè na nchịkọta gosiputa onu ogugu na irite uru nke di 5 - 6 percent kariri ndi ozo. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị na-etinye data n'etiti etiti azụmaahịa na mkpebi ire ahịa na-emeziwanye ahịa ha laghachi azụmaahịa (MROI) site na 15 - 20 pasent, nke na-agbakwunye $ 150 - $ 200 nke uru ọzọ.
Ka anyị nyochaa isi ihe atọ kpatara ndị otu ahịa na-ada na enweghị nchịkọta.
1. O na abu ichu nta n’ezi ochichiri
-enweghị nchịkọta, ịchọta otu esi agbanwe ndu na ndị ahịa na-agbanye mkpọrọgwụ na ịkọ nkọ na / ma ọ bụ okwu ọnụ. Dabere na eriri afọ gị, karịa data, pụtara ịla oge na ume dị ukwuu na ndị na-ezighi ezi, isiokwu, usoro ngosi - ma ọ bụ nke niile dị n'elu. Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa abụghị naanị ịgbalịsi ike ịgbanwe ndu, mana ịme ka ha bụrụ ndị ahịa dị ogologo oge.
Nke a abụghị ihe enwere ike iji aka mee n'ihi na enwere ọtụtụ mgbanwe na mmekọrịta dị aghụghọ. Onweghi uzo abuo, na mmasi ha nwere ike igbanwe ma site na ubochi. Ndị na-ere ahịa, gbalịa ka ha nwere ike, anaghị agụ ndị na - agụ akwụkwọ. Ọ dabara, nchịkọta nwere ike inye ìhè.
Nchịkọta nwere ike ịnye data ntinye aka, na-ekpughe ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ, yabụ ndị ahịa na-abanye nzukọ ọ bụla akwadoro. Learningmụta site na mkparịta ụka ahịa kachasị baa uru na-enyere ndị na-emegharị aka ịdịwanye mma mgbe niile. Ọmụmaatụ, nchịkọta nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na ihe ngosi mmịpụta ụfọdụ na-enweta nzaghachi siri ike karịa ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ọmụrụ nwa akwụsị mgbe oge ụfọdụ gafere. Ọhụhụ a na-enyere ndị ọrụ aka ịkwalite ọnụego ha dị nso ma belata usoro ire ere. Nchịkọta nwere ike ikpughe ọnọdụ na ịbawanye izi ezi nke pipeline, site na iji data iji ghọta ụdị azụmahịa ga-emechi n'ezie.
2. Nọgidesiri n’apịtị
Ndị na-ere ahịa na-arapara na ọnọdụ nrụpụta mgbe niile. Ha na-anwa ịmepụta ọtụtụ ndu dị ka o kwere mee, ziga ha n'ahịa ka ha chụsoo, wee lekwasị anya na nzaghachi na-enweghị isi banyere ihe a sịrị na ọ na-arụ ọrụ. Agbanyeghị dịka ekwuru n'elu, ọnụọgụ dị ukwuu nke ndị a anaghị agbanwe agbanwe. Na-enweghị nchịkọta, “gịnị kpatara” bụ ihe omimi, na ndị na-ere ahịa anaghị amụta ihe na mmejọ ha.
njikọ aka nchịkọta nye ndi n’azu ahia na ndi ahia ahia ka ha nye gi nzaghachi nke oma, ya mere ha gha aghaputa ihe n’ezie. Ha na-enye ọhụhụ a na-enwetụbeghị ụdị ya na mmasị ndị ahịa na nke a na-enye ndị otu aka ịnwekwu amamịghe ma na-arụ ọrụ karịa oge. Ihe otu ndị otu na-ere ahịa na-eche bụ ire ere ahịa kachasị ike nwere ike ọ gaghị abụrịrị ahịa ahịa kacha sie ike, mbọ ha nwere ike ịkwụsị n'ihi ya. Njikọ aka nchịkọta bụ ngwá ọrụ dị ike iji unstick ha site n'ịgbanwe POV ha, na inye data siri ike banyere ihe ọdịnaya na atụmatụ nwere mmetụta kasịnụ. Ozugbo ha ghọtara njem ndị ahịa, ha nwere ike ịkwalite usoro ha n'ụzọ ziri ezi.
3. Oke ahia
Ma ị na-ere tee-Chiefs ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-aza ajụjụ software, ịhazi onwe gị na-ewusi ọkwa ahịa gị. Ndị na - azụ ahịa taa juputara na olulu nke na ha enweghị oge ma ọ bụ mmasi na ngwaahịa ndị na - adịghị mkpa ozugbo ma daba na mkpa ha pụrụ iche. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ọ bụla, ọbụlagodi ndị na-azụ ahịa ọ bụla, dị iche, nke na-eme ka ịghọta mkpa ha na ịhazi ọfụma dịka nke a na-agaghị ekwe omume, na opekata mpe nchịkọta nyere aka.
Ndị ahịa na ndị ahịa nwere ọtụtụ data na mkpịsị aka ha site na isi na mpụga nke nwere ike inye aka kpughee ihe atụmanya chọrọ na mkpa ịnụ. Iji Nnukwu data, nchịkọta, na mmụta igwe, ụlọ ọrụ nwere ike ịhazi ozi ha na ndị ahịa ọ bụla. N'ụzọ nke a, nchịkọta na - amata okeiche gị na igwe mmadụ ma na - eme ka ohere ịmekọrịta ga - emechi.
N'ime usoro ire ere, nchịkọta na-eme ka ndị ahịa na ndị ahịa na-azụ ahịa mara ihe, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma karị, na-ekwughi ịmatakwu, nke jikọrọ ahịa arụpụtaghị ihe. Ọ bụ ihe dị mkpa na asọmpi asọmpi taa, yana dịka amụma nchịkọta na-apụ, ọ ga-adịwanye mkpa.
Azụmaahịa na-adabere na amụma nchịkọta iji mepụta data, bulie arụmọrụ ha, ma melite mkpebi. Gartner nwere Mgbatị Hype maka Ahịa CRM (2015) pegs Ahịa Predictive Analytics dị ka a elu-uru technology na-esote abụọ na afọ ise, na Searchrester Research achọpụta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa na-emejuputa ma ọ bụ na-akwalite amụma nchịkọta azịza taa ma ọ bụ mee atụmatụ ime ya ọnwa 12 na-esote. Amụma nchịkọta ewe ahịa otu si reactive ka proactive. Na-enweghị uru nke ngwaọrụ ndị a, ụlọ ọrụ ga-ahụ onwe ha ka ha ga-anọ n'ájá.
Tags: Analyticsnnukwu datakpochapụdatantinye aka datanyocha nyochagartnerharvard azụmahịa nyochaNwachukwunchịkọta ahịa na ahịaire nloghachi na ntinye egoire ere roiMcKinseylaghachi azụmaahịaROInchịkọta ahịadata erereịhazi ire ahịaire ahịa na ntinye egoahịa roi
DialogTech: Kpọọ Ntinye na Ntugharị Ntugharị